Ankadisoa Iavoloha: nitarina ny St Louis de Gonzague | NewsMada
Ankadisoa Iavoloha: nitarina ny St Louis de Gonzague
Notokanana, ny alatsinainy teo, ny efitranon-tsekoly vaovao telo sy ny birao fiasan’ny mpampinatra ao amin’ny sekoly tsy miankina Collège St Louis de Gonzague eny Ankadisoa-Iavoloha. Nisy ny fiaraha-miasa amin’ny minisiteran’ny Toekarena sy ny tetibolam-panjakana tamin’ny alalan’ny « Cellule de coordination des projets de relances économiques et des actions sociales » sy ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika sy momba ny asa.
750 ny mpianatra ao amin’ity sekoly ity ary tsy maharaka ny efitrano ka tsy maintsy nanaovana ezaka, raha ny filazan’ny tompon’andraikitra. Tafakatra 80 ny ankizy ao anatin’ny efitrano iray ka tsy manaraka ny fenitra izany ary tsy maintsy nitadiavana vahaolana.
Tetikasa niarahana amin’ny CCPreas no nahafahana nanao ny sekoly. Miasa amin’ny sehatra maro ny CCPreas toy ny fiaraha-miasa amin’ny kaominina sy ny sekoly. Amin’ity taona ity, 40 ireo tetikasa hatao, araka ny voafaritry ny tetibola.